फेरि एक हप्ता थपियाे निषेधाज्ञा, के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ? — Sanchar Kendra
फेरि एक हप्ता थपियाे निषेधाज्ञा, के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ?
बैंक तथा सहकारी संस्थाहरु र सरकारी कार्यालयहरु भीडभाड नगरी, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन हुन पाउने आदेशमा उल्लेख छ । यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्न भने प्रशासनले निषेध गरेको छ । व्यवसायीहरुले भने सरकारले अनुमति नदिए पनि असोज १ गतेबाट सञ्चालन गर्ने बताउंदै आएका छन् ।
यता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई भाडा बृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। चार वर्षपछि हवाई भाडा बढाउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको हो। मन्त्रालयले भाडा बढाउन कार्यदल बनाएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक नरेन्द्र थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले भाडा बृद्धि गर्ने मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
‘क्यानबाट आएको प्रतिवेदन तथा प्रस्तावका बारेमा मन्त्रालयमा छलफल भयो। भाडा बढाउने वा नबढाउने भन्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रको रायसमेत थप गरेर ल्याउन भन्दै क्यानलाई निर्देशन दिइएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने। हवाई भाडा प्रत्येक २ वर्षमा समायोजन गर्नुपर्ने नियम छ। यद्यपि गत चार वर्षदेखि समायोजन नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले भाडा बढाउन माग गर्दै आएका थिए।
यो पटक सरकारले परिवर्तन गर्न लागेको भाडा हो जुन २०७३ सालमा भएको थियो। जस्तो हालसम्म विराटनगरको कूल अधिकतम भाडा ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ छ। यो ‘क्लास’ अनुसार फरक हुन्छ। तर यसमा सरकारले तोकिदिएको अधिकतम भाडा ३ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ हो। त्यसमा १ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ इन्धन शुल्कका नाममा छुट्टै हुन्छ। इन्धन शुल्क तलमाथि हुँदा समग्र भाडा तलमाथि भइरहेको हुन्छ।
‘मन्त्री ज्यूले पहिलो कुरा पर्यटकीय क्षेत्रमा डलर फेयर तत्काल नहटाउने, इन्धनको मूल्यमा आयल निगमलाई नाफा कम गर्न पहल गर्ने तथा भाडा समायोजन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यी सबै कुरा एयरलाइन्सकै लाभमा छन्। यसको बदलामा उनीहरुले डलर फेयर हटाउने कुरामा सहमति जनाउन सक्छन्,’ मन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो।
मन्त्रालयले आयल निगमलाई आन्तरिक उडानको इन्धनमा न्यून नाफा लिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ। यसका लागि मन्त्री भट्टराई आफैंले पहल गरिरेका छन्। मन्त्रालयले यसअघि नै डलर फेयर हटाउँदा लुक्ला, पोखरा, माउन्टेन फ्लाइट, सिमिकोट र भरतपुरमा तत्काल डलर फेयर नहटाउने प्रस्ताव गरिसकेको छ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी असोज १ गते स्वास्थ्यकर्मी र कोरोना संक्रमितहरूको मनोबल बढाउन राति ८ बजे दीप प्रज्वलन गर्न सबैमा आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका उपचार सेवा महाशाखा प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूको सम्मान र संक्रमितहरुको मनोबल बढाउन घर घरमा दीप प्रज्वलन गर्न सबैलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए।